အိုင်တီခရီးသည်: Windows Boot တက်ချိန်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသော နည်းလမ်း(၅)မျိုး
In ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ, In နည်းလမ်းများ
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကျွန်တော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘလော့လေးကို လှည့်မကြည့်ဖြစ် တာတောင် တော်တော်ကြာ သွားပါတယ်.. အခုလည်း ဘလော့ပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ ဘာကစပြီးရေးရမှန်းမသိတာနဲ့.. ဒီပို့စ်လေးနဲ့ပဲ ပြန်ပြီးအစပြုလိုက်ရပါတယ်... တော်တော်များများကတော့ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အသုံးဝင်သွားတယ်ဆိုရင် ရေးရကျိုးနပ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာစဖွင့်တဲ့အခါ Windows တက်တာနှေးတဲ့ပြဿနာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ တကယ်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နည်းလမ်း(၁) Decrease Start up Delay
Start up Delay ကို လျှော့ချဖို့အတွက် Start --> Run ကိုသွားပြီး msconfig လို့ရိုက်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။ Popup Windows တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ System Configuration ထဲကမှ Boot ဆိုတဲ့ Tab ကိုသွားပါ (General, Boot, Services, Startup, Toos စသည်ဖြင့် Tab များရှိပါသည်)။ Timeout ရဲ့အောက်က အကွက်ထဲမှာ 30 Seconds ကို5လို့ပြောင်းပြီး apply လုပ်လိုက်ပါ။
နည်းလမ်း(၂) Defragment your Hard Drive
ကွန်ပျူတာများကို ပိုမိုမြန်ဆန်သွက် လက်စေဖို့အတွက် Defreg ပြုလုပ်ခြင်းဟာလည်း အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Hard Drive ကို Defrag လုပ်ဖို့အတွက် Utility Software တွေ အများအပြားရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Software မရှိရင်လည်း Windows မှာပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့ Disk Defragment ကိုသုံးပြီးဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ Start-->All Programs-->Accessories-->System Tools-->Disk Defragmenter။
နည်းလမ်း(၃) Remove unwanted Startup Programs
Windows စတက်တက်ချင်းမှာပဲ မလိုအပ်တဲ့ Program တွေ Background မှာ Run နေတာဟာလည်း ကွန်ပျူတာရဲ့ Boot တက်ချိန်ကို ကြာမြင့်စေတဲ့ပြဿနာရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Program တွေ Run နေတာကို Remove လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း(၁)က အဆင့်အတိုင်းပဲ Start-->Run (Search programs or files) မှာ msconfig လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ System Configuration ထဲက Services နဲ့ Startup Tab နှစ်ခုစလုံးမှာရှိတဲ့ (မလိုအပ်တဲ့) Programs များကို uncheck လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
နည်းလမ်း(၄) Deleate Temporary Files from Your Computer
ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ Temporary Files တွေဟာ ကွန်ပျူတာကိုလေးလံစေပြီး များစွာနေရာယူတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဖျက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Start-->Run (Search programs or files) မှာ %temp% လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ Temporary Files တွေပါတဲ့ Folder တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ File တွေအားလုံးကို delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။
နည်းလမ်း(၅) Scan Disk for Issues
My Computer ကိုသွားပြီး Drive C ပေါ်မှာ Right-Click ထောက်လိုက်ပါ ။ Properties ကိုသွားပါ။ ပြီးရင် Tools ဆိုတဲ့ Tab ကိုသွားပြီး Error-Checking မှာ Check now, Automatically fix file system error။ အထက်ပါအဆင့်များတစ်ခုပြီးတိုင်း Restart လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ...
Posted by . at 6.6.12
Labels: ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ
Thanks. I will try these option.
my computer is taking so long time to boot. some time 15 minutes to boot up.
very nice post. Thanks for knowledge sharing.